Rooble oo guddi mucaarad ah u magacaabay xiisadda Muqdisho + Magaca - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – Golaha Fulinta ee Ra’iisul Wasaare Mohammad Hussein Roble wuxuu ka kooban yahay 11 xubnood oo ka talo bixinaya xal u helista qaladka looga-laasihii ee ka dhacay Caasimadda Muqdisho ee Axadle Soomaaliya.
Rooble ayaa sheegay inuu magacaabay guddiga kadib markii uu arkay qodobka 99aad, faqradihiisa A, B iyo F ee dastuurka hordhaca ah ee Soomaaliya, qodobka 100aad, faqradihiisa A iyo B ee dastuurka iyo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo in Rooble uu la wareegayo doorashada iyo masuuliyada amniga .
Guddi uu magacaabay Wasiirka Amniga Qaranka gudoomiyaha looga saaray masuuliyada Dowlada Xasan Xundubey gaarsiinta, laakiin waxay kujirtaa Xildhibaanada iyo xubnaha mucaaradka
Guddigu wuxuu ka kooban yahay xubno ka socda labada aqal ee baarlamaanka, mucaarad iyo xirfadlayaal dowladeed, iyo sidoo kale ra’iisul wasaareyaal.
Raiisel wasaare Rooble ayaa magacaabay guddiga:
1- In la xalliyo caqabadaha saameeyay milateriga arrimo siyaasadeed awgood.
Rooble ayaa faray guddiga inay soo afjaraan xal shan maalmood ah oo laga gaarayo khilaafka ka taagan Caasimadda Muqdisho.
Howsha guddiga ayaa bilaabatay maanta oo ay taariikhdu tahay 4-ta May, 2021.
Magaca guddi la magacaabay
Wasiirka Amniga Xasan Xundubey Wasiirka Arimaha Gudaha Mukhtaar Xuseen Afrax Xubin ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Xasan Xuseen Xaaji Xubin Wasaaradda Cabdi Sheekh Axmed Rooble Xubin ka tirsan Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Farxaan Cali Axmed Xubin ka tirsan Wasaaradda Warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaalla Xubin golaha Guurtida Dhuxulow (Dhagdheer) Xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur Xildhibaan Mahad Salaad xubin